प्रतिगमन जिन्दाबाद !! - tilottamacitynews
प्रतिगमन जिन्दाबाद !!
मोहन न्यौपाने - 2021 Feb 04 09:18 PM Tweet
तिलोत्तमा ,२०७७ माघ २२ । देश मुठभेडको शृंखलामा खुड्किलो टेक्दै छ। दुइ तिहाइ आएकै पार्टीको त त र म म ले जनता दु:ख भोग्न बाध्य छन्। प्रतिपक्षि आए आँप न आए झटारोको चटारोमा छन्। तथापि अबको ३ महिना जनताले पार्टीले जुनसुकै कदम चालेको खण्डमा पनि शान्तिको सासफेर्न हम्मे हुने देखिन्छ। नेकपाको घर भित्रको खिचलो र तानातानले जनतामात्र हैन देशको समृद्दिको बाटोलाई पनि फोहोर तुल्याउने निश्चित छ। अर्थमन्त्री चुनावी बजेटमा आश्चर्य मान्नै नपर्ने र त्यो स्वाभाविक भएकोले झन् अर्थतन्त्र माथि उठ्ने दावी गरेका छन्। बैशाख १७ र २७ गतेको टुंगो लगाएरै हिडेको अर्को थरि नेकपाले चुनावसम्म आफ्नै टुंगो नभएको निर्बाचन आयोगलाई प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। एकथरी सडक आन्दोलनको सीमासम्म पुगेको छ। सडकमा मुर्दावाद हुदा सामाजिक संजालमा जिन्दाबाद र सामाजिक संजालमा मुर्दाबाद हुदा सडकमा जिन्दाबाद हुनेको बाहुल्य देखिएको छ। एकपक्षले अर्को पक्षलाइ एक दिन बिराएर गाली गलौज गरिरहेको देखिन्छ त्यो पनि नथाक्ने गरि।
संविधानत कानुन ब्यबसायी र न्यायधिसहरुको समग्र कुरा सुन्दा असंबैधानिक कदमको सर्बत्र बिरोध भएको देखिन्छ भने केपी ओली पक्ष यसलाई सहजै स्विकार्न सक्दैन। प्रचण्ड नेपाल पक्ष यसलाई पुनर्स्थापना गराउने दौडमै ब्यस्त छन्। त्यसै क्रममा कानुन बिपरित विभिन्न आयोगको नियुक्तिले झन् सडक तातिरहेको छ। माघ २२ को बन्दलाई हेर्ने हो भने गृहको विज्ञप्तिले जनताको बिना सुरक्षा खुल्लानिती अबलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ भने प्रचण्ड नेपाल पक्षले सडकमा सरकार बिरुद्ध आगो बालिरहेको छ। यस बेलाको प्रतिगमन हो को ? जनताले चिन्ने गारो मानिरहेका छन्। सडक कि सदन ?
सदनलाई राम्रो मानौ त बिघटन गरेर थाहा नपाउने गरि सडकमा अहिल्यै देखि आफ्नो चुनावीसभा गर्दै हिडेको छ। सडकलाई राम्रो मानौ त पार्टीको झगडा घर मिलाउन नसकेर जनतालाई सास्ती दिएको भान हुन्छ। सधै बन्दले मात्र देश र जनको भलो नहुने प्रष्ट देखिन्छ। अब बन्दको विकल्प देख्नु र हेर्नु जरुरि पनि छ। आखिर संबिधानलाइ लात हानेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि किन यस्ता निर्णय निरंकुशतापुर्वक गरिन्छ? यसमा दोषी को हो जनता कि नेता ? नेता हुन् भने अहिले जनता गाउ गाउमा लड्नु र कित्ता काट गर्नु के अर्थ छ ? अनि जनता हुन् भने कहिलेसम्म नेताको झगडाको पछि लागेर देशलाई अझै ५० बर्ष पछाडी धकेल्ने ? अब जनताले सोच्ने पर्ने बेला आएको छ , जनमत पाएर पनि जनताको मतको दुरुपयोग गर्ने , अबहेलना गर्ने, समृद्दीको यात्राको बाधक बन्ने, एक अर्कामा दोषारोपण गर्नेहरुका बिरुद्ध जाग्नु जरुरि छ। अब मुर्दाबाद होइन जिन्दाबाद भनौ , बरु प्रतिगमन किन नहोस। प्रतिगमन जिन्दाबाद !!!